လက်ဖက်ရည်အချိုသောက်ရင်ဖြင့် .. အသက်တွေ အမှန်ပျောက်ကြမှာမို့ .. ဆင်ခြင်ကြဖို့ ကြည့်စေချင် – ရှအေလငျး
လက်ဖက်ရည်အချိုသောက်ရင်ဖြင့် .. အသက်တွေ အမှန်ပျောက်ကြမှာမို့ .. ဆင်ခြင်ကြဖို့ ကြည့်စေချင်
(လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေက ပြန်သိမ်းလာတဲ့ အချိုခြောက် အဟောင်းတွေကို နေလှမ်း လွှစာမှုန့်ရော အရောင်ဆိုး အနံ့ဖြန်းပြီး ပြန်ရောင်းကြပါသည်)
လက်ဖက်အစိုနဲ့ သုတ်ထားတဲ့ လက်ဖက်သုတ်ရယ် ..လက်ဖက်ခြောက်ခပ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းရယ် ..နှပ်ပြီးဖျော်ထားတယ်ဆိုတဲ့ လက်ဖက်ရည်ချိုရယ် ..ဘာလို့ အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာ မတူကြတာလဲလို့.. FDA က ဝန်ထမ်းတွေရယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရယ်၊ ဆရာဝန်တွေရယ် ဝိုင်းပြီး အဖြေရှာသင့်ကြပြီလို့ မြင်ပါတယ် ..
ဆိုလိုချင်တာက လက်ဖက်အစိုမှာကော လက်ဖက်အဖန်ခြောက်မှာကော လက်ဖက်အချိုခြောက်မှာကော လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုဗေဒ ဆိုးဆေး အရောင် အနံ့တွေပါသလား မပါသလား ဆိုတာ ဘယ်သူက အာမခံပေးမလဲ ဆိုတာပါပဲ
မြန်မာတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းကတော့ အာဆီယံမှာ ၆၆နှစ်နဲ့ဘိတ်ချီးရောက်နေတာ ကြာပါပြီ မိတ်ဆွေများခင်ဗျား ။crd . . . Si Thu Aung
(လကျဖကျရညျဆိုငျတှကေ ပွနျသိမျးလာတဲ့ အခြိုခွောကျ အဟောငျးတှကေို နလှေမျး လှစာမှုနျ့ရော အရောငျဆိုး အနံ့ဖွနျးပွီး ပွနျရောငျးကွပါသညျ)
လကျဖကျအစိုနဲ့ သုတျထားတဲ့ လကျဖကျသုတျရယျ ..လကျဖကျခွောကျခပျထားတဲ့ ရနှေေးကွမျးရယျ ..နှပျပွီးဖြျောထားတယျဆိုတဲ့ လကျဖကျရညျခြိုရယျ ..ဘာလို့ အရောငျ၊ အနံ့၊ အရသာ မတူကွတာလဲလို့.. FDA က ဝနျထမျးတှရေယျ၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှရေယျ၊ ဆရာဝနျတှရေယျ ဝိုငျးပွီး အဖွရှောသငျ့ကွပွီလို့ မွငျပါတယျ ..
ဆိုလိုခငျြတာက လကျဖကျအစိုမှာကော လကျဖကျအဖနျခွောကျမှာကော လကျဖကျအခြိုခွောကျမှာကော လူကို အန်တရာယျဖွဈစတေဲ့ ဓာတုဗဒေ ဆိုးဆေး အရောငျ အနံ့တှပေါသလား မပါသလား ဆိုတာ ဘယျသူက အာမခံပေးမလဲ ဆိုတာပါပဲ
မွနျမာတှရေဲ့ ပမျြးမြှသကျတမျးကတော့ အာဆီယံမှာ ၆၆နှဈနဲ့ဘိတျခြီးရောကျနတော ကွာပါပွီ မိတျဆှမြေားခငျဗြား ။crd . . . Si Thu Aung
ကားနေတဲ့.. မေးရိုးခွဲစိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ.. ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ နေမင်း..
ဝိုင်းဖမ်းတဲ့လူတွေကို.. ပြန်စိန်ခေါ်ပြီး …လူ ၅၀ လောက်နဲ့ပြန်ဖိုက်တဲ့ …သူခိုး ၃ ယောက် အခုတော့ …
B ပိုး / C ပိုး နှင့် အသဲကင်ဆာသမား များအတွက် သတင်းကောင်းတခုပါ
လာမယ့် ၄၈ နာရီမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပိတ်သွားနိုင်ခြေရှိ
မုတ်ဆိတ်ရဲ့ အစွမ်းပါဝါကို သက်သေပြနေတဲ့ ပုံရိပ်များ
လေယာဉ်သံ ကြားတိုင်း ဒီ မိသားစုတွေ သတိတရ ကြေကွဲနေနေတော့ မှာ :( :( :(